Wararka Maanta: Arbaco, Nov 21, 2018-Wufuud gaadhey degmada Taleex si ay qayb uga noqdaan soo afjarida colaad toban sano ku dhowaan ka Taagnayd
Wufuudan oo ka kala yimi degaano badan oo dalka gudihiisa iyo debediisa ah ayaa waxa u dambeeyey Boqor Burhaan Boqor Muuse oo horkacayey boqolaal maxad-dhaqameed, Cuqaal, Culimo iyo waxgarad isugu jira.
Boqorka iyo weftigiisa oo duhurnimadii maanta soo gaadhey Taleex ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey iyadoo dadku tubnaayeen degaano ka durugsan magaalada oo kaga aadan dhinaca Garoowe.
Boqorka ayaa waxaa ku soo dhoweeyey Garaad Saleebaan Garaad Maxamed iyo cuqaasha beelaha degaankaasi wada dega, Waxaan ay Boqorka uga mahad celiyeen hiilka tolnimo ee ay isugu soo xilqaameen qayb ka noqoshada islaaxa beelaha wallaalaha ah.
Boqorka ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta waxaanu uga cudur daaray daahida waqtiga iyo dadka cadceeda tubnaa, iyadoo Boqorka iyo weftigiisu ay ka soo kicitimeen magaalada Garoowe.
Magaalada Taleex ayaa muuqaal ahaan ka duwanayd sidii ay ahayd laga soo bilaano dhamaadkii 2011 oo colaad laba daamood magaalada u qaybisay ka dhacday taas oo galaafatay dad aad u badan dhaqaalaha degmadana dhulka la sintay sida ay xaqiijiyeen aqoonyahanka degaankaas.
Dhawr todobaad oo beelaha degmada Taleex ay iskood u wadeen wadahadal ayaa laga gaadhey is afgarad buuxa oo laga gaadhey colaadaas curyaamisey guud ahaan degmada Taleex iyo gobolka Soolba.
Si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda ayaa la filayaa in Guud ahaan xaflad aan horey uga dhicin degmada lagu qabto taas oo ah ta sababtay in bulshada qaybaheeda kala duwan ay u boqoolaan halkaas iyadoo dhowrjeer oo hore lagu guuldaraystay balse tan ay ka duwan tahay maadaama uu yahay heshiis aan cid dhexdhexaadinaysaa aanay jirin ee iskood dantooda wada fahmaan.